Somaliland: Dawladda Ingiriiska oo Caddeysay inay Somaliland Kala Shaqeynayso Doorashada Baarlamaanka, Kuna Ammaantay Guulaha ay Gaadhay - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Dawladda Ingiriiska oo Caddeysay inay Somaliland Kala Shaqeynayso Doorashada Baarlamaanka, Kuna...
Xildhibaan Stephen Doughty oo Su’aalo Somaliland Khuseeya Baarlamaanka ka hor Weydiiyey Wasiirul-dawlaha Iskaashiga Caalamiga ah
Wasiirul-dawalaha Iskaashiga caalamiga ah dalka UK, Mr.Rory Stewart, ayaa ammaanay Jamhuuriyadda Somaliland oo uu ku tilmaamay mid tallaabasatayGuullo wax ku ool ah, waxaanu caddeeyeyinay kala shaqeyn doonaan Doorashada Baarlamaanka ee soo socota.
Wasiirul-dawlaha Iskaashiga Caalamiga ah ee Ingiriisku wuxuu sidaasi ka sheegay fadhi uu maanta yeeshay baarlamaankaUK , ooXildhibaan Stephen Doughty oo ka mid ah saaxiibada Somaliland ee laga soo doortoKoonfurta Cardiff uuwax waydiiday inayDawladda UK Somaliland kala shaqeynaysoSaameyntaisbeddelka Cimilada Adduunka, Doorashadasoo socota ee Baarlamaankaiyo Wadahadalkii u dhexeeyey Somaliland iyo Soomaaliya.
Siday werisay Wakaaladda Wararka Somaliland (SOLNA), Mr.Rory Stewart wuxuu Somaliland ku sheegayinayku taallo bad ay dhibaatooyin badani kajiraan, waxaanu qiray inay guullo badan gaadhay, halka uu Soomaaliyanaku tilmaamay mid aytaagan tahay xaalad adagi.
Mr.Rory Stewart Wasiirul-dawlaha Iskaashiga caalamiga ah Ingiriisku wuxuu sheegay in Dawladda UK ay Jamhuuriyadda Somaliland kala shaqeysay Doorashadii u dambeysay ee Madaxtooyadda, isla markaana ay ka taageerayaan Doorashadasoo socota ee Baarlamaanka Somaliland.
“Nasiib wanaagwaxaanla kulmay booqashadaydii u dambeysay ee aan ku tagay Somaliland,madaxweynahahadda talada qabtay. Waxaan filayaa inay jiraan wax badan oo aynu la qaban karno Somaliland, waxaan ku faraxsan nahay inaan la fadhiisan doonoxildhibaannada si aanu uga wada hadalno qoddobadaSomaliland khuseeya,”ayuu yidhi Mr. Rory Stewart.